Bukavu Sy Ny Sisintany Roandey-Kongoley: Tanàna Iray Eo Anivon’ny Ady · Global Voices teny Malagasy
Bukavu Sy Ny Sisintany Roandey-Kongoley: Tanàna Iray Eo Anivon'ny Ady
Nandika (fr) i Jennifer Brea
Voadika ny 17 Aogositra 2017 15:28 GMT
(Lahatsoratra tamin'ny Mey 2007)
Kakaluigi, misionera katolika iray izay monina any amin'ny repoblika demokratikan'i Kongo Atsinanana (RDC) nandritra ny 35 taona no milaza ny ahiahiny mikasika ny ho avin'i Bukavu.
Tananàn'ireo sisa velona i Bukavu. Nandritra ny ady voalohany tao Kongo (1996-1997), hita ho lasa takalonaina i Bukavu nandritra ny ady nifanaovan'ireo tafiky ny governemanta Tutsi sy ireo Hutus, nialokaloka tao amin'ny faritra ireto farany taorian'ny vonomoka nanjo ny roandey. Nifanandrina tao ny tafiky ny fanjakana sy ireo mpikomy nandritra ny ady faharoa tao Kongo (1998-2003). Tamin'ny taona 2004, nanjary lasa teo ambany fangejan'ireo miaramilan'ny Jeneraly Nkunda ny tanàna, jeneraly mpanohitra ary mpomba ny Tutsi, ary tao anatin'ny telo andro, vehivavy 16.000 no voaolana.
Ao Bukavu, mbola manjaka foana ny tsy fandriampahalemana sy ny herisetra. Mitohy ny fanafihana ataon'ireo FARDC sy ny ady ao Kivu-Avaratra.
Tsy mbola nitondra ny fahalemana sy ny fahamarinan-toerana nampanantenainy foana ireo fifidianana izay ho filoham-pirenena. Manontany tena i Kakaluigi raha toa ny filohan'i Kongo, Joseph Kabila, ka manaraka ireo tombontsoan'ny vahoakan'i Bukavu na ireo an'ny fanjakàna roandey.
Bukavu, ny 20 may 2007 maraina. Ampoka fahanginana sy filaminana ny rehetra, saingy fahatsapana maro no mitranga any anatin'ireo toerana misy ireo vahoakanay. Be rahona loatra eny amin'ny faravodilanitra, izay toa tsy anantenàna zavatra tsara. Tsy fantatra izay tiana haleha, sy ny hoe mitongilana mankaiza i Kabila. Manontany tena hoe: iza no tena hiresahana, amin'ireo Kongoley sa amin'ireo Roandey. Na miaraka amintska izy ny antoandro ary miaraka amin'i Kigali mandritra ny alina.
Mahatonga antsika hieritreritra zavatra maro ny tantaran'i Nkunda izay tsy misy zavatra mazava mihintsy. Tsapako ho angamba misy toejavatra tena mitovy amin'ny tamin'ny taona 1998, miomana mangingina, na azo heverina ho tsy misy aza ny finiavana ara-politika iraisam-pirenena izay nisy 9 taona lasa izay, satria tena miova be ny toedraharaha.
Nefa mbola tena mazava hatrany fa manana ny vahohony amin'i Roandà i Kongo raha resaka tombontsoa ho an'ny vahoaka. Manovo herim-po sy fanantenana ireo mponina. Manantena izahay fa tsy ho kivy izy ireo mihoatra ny fetra rehetra. (PB)
Sary an'i Julien Harneis: Sekoly garabola iray eo akaikin'i Bukavu, Repoblika Demokratikan'i Kongo.
14 ora izayBorkina Faso